Nampionona Ahy i Jehovah Tamin’izaho Namoy Fo
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Bengali Boligara Cebuano Chichewa Chitonga Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Goujrati Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Myama Norvezianina Népali Oromo Pangasinan Pendjabi Poloney Portogey (Brezila) Romanianina Rosianina Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Télougou Vietnamianina Waray-Waray Xhosa Zoloa Éwé
Notantarain’i Miklós Aleksza
Nihohoka tao anaty rano aho tamin’izay. Te hitraka aho nefa tsy afaka nihetsika ny tendako. Natahotra aho ka niezaka ny hivadika, nefa tsy tafahetsika koa ny tanako sy ny tongotro. Nanomboka sempotra aho, satria nidiran’ny rano ny tratrako. Tamin’ny 1991 izany no nitranga. Niova tanteraka ny fiainako nanomboka teo.
AVY any Hongria izahay. Tany Szerencs aho no teraka, ary lehibe tany Tiszaladány, faritany somary avaratra atsinanana. Niaraka tamin’ny namako aho tamin’ny Jona 1991, mba hilomano tao amin’ny Reniranon’i Tisza. Mbola tsy nahazatra anay anefa ilay toerana. Noheveriko fa lalina ilay rano, ka tonga aho dia nitsoraka. Loza anefa fa hay narivo kely ilay izy! Tapaka ny taolana telo tao amin’ny tendako, ary voa koa ny hazondamosiko. Hitan’ny namako fa tsy afa-nihetsika aho, ka nosintonin’izy ireo moramora. Izay no tsy nahafaty ahy.
Nahatsiaro saina tsara aho, ka fantatro hoe tena voa mafy aho. Nentina tamin’ny helikoptera nankany amin’ny hopitaly aho, ary nataon’ny dokotera izay tsy hampihetsiketsika ny hazondamosiko. Nafindra tany Budapest renivohitra aho tatỳ aoriana, mba hampianarina hihetsika tsikelikely. Tsy maintsy nitsilany foana aho nandritra ny telo volana. Afaka nihetsika ihany ny lohako avy eo, fa nalemy kosa hatreo amin’ny soroko no ho midina. Vao 20 taona aho tamin’izay, nefa tsy nahavita na inona na inona intsony fa nila olona foana. Kivy be aho ka te ho faty.
Navela hody ihany aho tamin’ny farany, ary natoro an’i Dada sy Neny ny fomba hikarakarana ahy. Asa be anefa ilay izy, ka reraka sy kivy koa ry zareo. Herintaona tatỳ aoriana àry, dia ketraka be aho ary lasa aretina mihitsy ny hakiviako. Nisy manam-pahaizana manokana tamin’izay, nanampy ahy hanamboatra ny saiko mba ho vitako ny hiatrika an’ilay izy.
Nanomboka nandinika koa aho hoe: ‘Inona moa no tena dikan’izao fiainana izao? Ary maninona aho no mijaly hoatr’izao?’ Namaky boky be dia be aho mba hahitako ny valiny. Nanandrana namaky Baiboly koa aho, fa hoatran’ny sarotra be ilay izy dia najanoko. Nanontany mompera mihitsy aza aho, nefa tsy nahafa-po ahy ny teniny.
Lasa tsapako hoe tena tia ahy Andriamanitra
Tamin’ny 1994 anefa, dia nisy Vavolombelon’i Jehovah roa tonga tao aminay, ary nasain’ny dadanay niresaka tamiko. Nanazava izy ireo hoe hataon’Andriamanitra paradisa ny tany, ary hofoanany ny aretina sy ny fijaliana. Hitako hoe tsara be aloha izany, kanefa hoatran’ny tsy nino aho. Novakiko anefa ireo boky roa nomen-dry zareo. Nanaiky hianatra Baiboly aho taorian’izay. Nampirisika ahy hivavaka koa ry zareo.
Rehefa nandeha teny ny fianaranay, dia voavaly tao amin’ny Baiboly daholo ny fanontaniako. Lasa tsapako koa hoe tena tia ahy Andriamanitra. Nianatra Baiboly nandritra ny roa taona aho, ary natao batisa tamin’ny 13 Septambra 1997. Tao an-trano ihany aho no natao batisa, tao anaty kovetabe fandroana. Faly be mihitsy aho tamin’izay!
Nifindra tany amin’ny trano fitaizana kilemaina tany Budapest aho, tamin’ny 2007. Lasa afaka nitory momba an’ireo zavatra tsara be nianarako aho tany. Afaka nivoaka ny trano mihitsy aza aho rehefa tsara ny andro, ka niresaka tamin’ny olona. Manana seza mikorisa misy maotera mantsy aho, ka ny saokako no amiliako an’ilay izy.
Nisy fianakaviana nanampy ahy tao amin’ny fiangonanay, ka nahazo ordinatera manokana aho. Ny fihetsiky ny lohako no ibaikoako an’ilay izy, ka afaka mitelefaonina sy manoratra amin’izay olona tsy tratra an-trano teny am-pitoriana aho. Lasa mahay miresaka kokoa aho noho izany, sady mba tsy mifantoka be amin’ny aretiko.
Ordinatera mahay mamantatra ny fihetsiky ny lohako no ampiasaiko rehefa mitory aho
Afaka mivory mihitsy aza aho. Any ambony rihana ny fivoriana, ka rehefa tonga any amin’ny Efitrano Fanjakana aho dia misy rahalahy mibata ahy moramora miaraka tamin’ny sezako. Afaka manome valin-teny koa aho. Izay rahalahy eo akaikiko no manangan-tanana, ary izy koa no mitazona ny Baiboliko sy ny bokiko rehefa mamaly aho.
Mbola manaintaina be foana ny vatako, sady mila olona hanampy foana aho. Mahatsiaro ho kivy àry aho indraindray. Mampahery ahy anefa ny mieritreritra hoe i Jehovah Andriamanitra no namako, ary mihaino ahy foana izy rehefa mamboraka ny ato am-poko aho. Manatanjaka ahy koa ny mamaky Baiboly isan’andro, sy miaraka amin’ireo mpiara-mivavaka amiko. Tena tia ahy sy mampahery ahy izy ireo, sady mivavaka ho ahy mba tsy hikorontan-tsaina na hamoy fo aho.
Tsapako hoe nampionona ahy i Jehovah tamin’ny fotoana tena nilako an’izany. Lasa manana fanantenana aho izao hoe hataony lavorary rehefa ao amin’ny tontolo vaovao. Amin’izay aho dia ho afaka ‘handeha sady hitsambikimbikina ary hidera azy’, satria be fitiavana sy tsara fanahy izy. Tsy andriko izay hahatongavan’izany fotoana izany!—Asan’ny Apostoly 3:6-9.
Afaka manampy anao hatanja-tsaina ny Baiboly.
Hizara Hizara Nampionona Ahy i Jehovah Tamin’izaho Namoy Fo